Maraykanka, 01 May 2017
Isniin 1 May 2017
6 Sano Kadib Dilkii Bin Laden Maxaa Isbedelay?
Caawa oo kale lix sano ka hor waxaa ciidamada Maraykanu ay khaarajiyeen hoggaamiyihii sida weyn loo doonayey ee Al-Qaacida Osama Bin Laden kadib hawlgal ay ka fuliyeen gudaha dalka Pakistan.
Mareykanka: Jaamacado Bilaabay Dhigista Af-Soomaaliga
Qaar ka mid ah jaamacado ku yaalla dalka Mareykanka ayaa bilaabay dhigista luuqada Soomaaliga oo ka mid ah luqadahaugu caansan Qaarada Africa.
Trump: "Ciyaarta Kuuriyada Waqooyi Waa Sida Jeeska oo kale"
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuusan faraxsanaan doonin haddii Dowlada Kuuriyada Waqooyi ay tijaabiso gantaal kale oo Niyukleer ah, kaasoo noqon doona kii lixaad oo ay riddo.
Xaalada Soomaalidi Lagu Xiray Mareykanka
Labadii bilood ee ugu dambeysay waxaa walaac xooggan uu la soo dersay Somalida sharciyada loo diiday ama aan cosiyadooda megangalyo muddo looga soo jawaabin ee ku nool dalka Mareykanka.
Qoraal cusub oo la soo bandhigay ayaa lagu sheegay in lataliyihii hore ee amniga qaranka Maraykanka Micheal Flynn inuu lacago ka badan $500,000 ka qaatay dalka Turkiga, halka uu Ruushkana ka helay tobannaan kun oo dollar,
Soomaalida oo Soo Dhaweeyay Go'aanka Mareykanka
Soomaalida ku nool dalka Mareykanka ayaa soo dhaweeysay go,aanki kasoo baxay Hey’adaha Socdaalka Mareykanka ee ahaa inay joojinayaan qabqabashada dadka Soomaalida ah ee sharci darrada ku jooga dalkaan Mareykanka.
Mareykanka oo Joojiyey Qabashada Dadka Soomaalida
Hey’adaha socdaalka ee Mareykanka ayaa ku wargeliyay safaaradda Soomaalida inay joojinayaan qabqabashada dadka Soomaalida ee sharci darada ah oo aan guryahooda ama goobahooda shaqo loogu tagi doonin.
Trump oo Maanta Shaacinaya Qorshe Canshuur Dhimis
Filashada qorshaha canshuur dhimista loo sameynayo shirkadaha waa weyn iyo shaqsiyaadka ee madaxweyne Donald Trump ayaa sare u qaaday qiimaha suuqyada saamiyada Mareykanka shalay iyo kuwa qaaradda Asia, xalay.
Buug Laga Qoray Soomaalida Ohio iyo Minnesota
Waxaa xalay magaalada Colombus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka lagu soo bandgigay buug ilaga qoray jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolada Ohio iyo Minnesota.
Obama oo Baaq u Diray Dhallinyarada
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo markii ugu horeysay dib ugu soo laabtay nolosha dadweynaha tan iyo markii uu xilka ka degay ayaa ugu baaqay da’ yarta magaalada Chicago inay u dhaqdhaqaaqan bulshada, si la mid ah isaga, inta uusan siyaasadda gelin.